France vs Belgium : Dariska oo kulanki 74-aad kulmaya , ogoow xogta xiisaha leh ee kulanka
Monday, February 18th, 2019 - 18:58:51
Tuesday July 10, 2018 - 10:03:33 in Wararka by Hussein Hadafow
Xulalk France iyo Belgium ayaa caawa ku kulmi doona kulankakoowaad wareega nus-dhammaadka koobka adduunka 2018.
Xulka Belhium ayaa doonaya inuu garaaco xulka France oo ay daris wadaag yihiin si uu u beegsado fiinaaki u horeeyay ee koobka adduunka uu kasoo muuqdo, France ayaa dhankoda doonaya in ay tiigsadaaan fiinaalki saddexaad ee koobka adduunka si ay ugu guulaystaan markoodi labaad isla markaana ay ula midoobaan dalalka Uruguay iyo Argentina oo min laba jeer ku guulaystay.
France ayaa dib u helaysay Blaise Matuidi kadib markii uu ganaax ku seegay kulanki Uruguay waxuuna booska kala bixi doonaa Corentin Tolisso kaasoo bandhig wanaagsan sameeyay kulanki Uruguay.
Olivier Giroud ayaa safkiisa sii haysan doono waloow uusan samayn hal fursad oo gool loo filan karo koobka adduunka 2018.
Daafaca dadabka dambe Thomas Meunier ayaa ganaax uga maqnaanaya xulkaBelgium, sidaaawgeed Tababare Roberto Martines waxuu isku shaandhayn ku samayn doonaa daafaciisa.
France ayaaBelgium-ka hoery u garaacay saddex kulan oo tartamada waa wyan ay ku kulmeen laba kamid ah ay koob adduun ahaayeen.
Xulka France ayaa dhigooda 3-1 kaga adkaaday kulan katiran wareega Group-ka 1938 oo ay iyagu marti gelyeen, sidoo kale waxay kadib waqti dheeri 3-2 kaga adkaadeen1986 kulanka kaalinta saddexaad ciyaarihi lagu qabtay Mexico. Waxaa usii dheer in ay 5-0 ugu wood sheegteenciyaar katirsanayd Uero 1984 kolka uu saddexleey dhaliyeyay Michel Platini.
Belgium ayaadhankooda ku gacan sareeyay kulamada saaxibtinimo gaar ahaan 3-di u dambaysay 1 guul iyo 2 barbaro ayeey ka heleen taasoo ka dhigan in ay raadinayaan guushoodi ugu horaysy ee tartan caalami ah.
Kulankani waxuu noqon doona kulanki 74 ee labada da ldhexmara, Belgium ayaa gaartay 30 guul halkaFrance 24 jeer adkaadeen 19 kulana ay barbro ku dhamaysteen.
Waa kulani 6-aad oo ay France semi finalka koobka adduunka ciyaarto waxaana laga adkaaday sadddexd u horaysay 1958 Brazil ayaa5-2 uga adkaaty xilli uu Pele saddexleey ka dhliyay , 1982 oo ay West Germany 5-4 rigoorayaal uga adkaatay kadib ciyaar 3-3 kusoo idlaatay. Iyo 1986 oo ay markale Germany garaacday kadib ciyaar 2-0 kusoo dhamaatay.
Dhankooda waxay soo guulaysteen 1998 oo ay Croatia 2-1 uga adkaadeen iyo 2006 o ay Portugal 1-0 ku lagdeen.
Belgium haljeer ayaysemi final-ka koobka addduun kasoo muuqdeen waxaana 2-0 ku garaacay Xulka Argentina 1986 iyadoo goolasha uu ka dhaliyay Diego Maradona.
Sidoo kale waxay guuldaro la kulmeen hal jeer oo ay semi final-ka koobk Euero ciyaareen waxaan a2-1 uga adkaaday West Germany 1972.
Belgians ayaanan lagaadkaan 24 kulan ee u dambeeyay 19 guul iyo 5 barbaro
Romelu Lukaku ayaa 13 kulan ee u dambeeyay ku lugyeeshay 20 gool 17 ayuu dhaliyay halka uu 3 caawiyay.
Garsooraha: Andres Cunha (Uruguay)
Saacadda: 9:00 PM